Thailand: Telo taona aty aorian’ny Fanonganam-panjakana tamin’ny 2006 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2009 11:12 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, 简体中文, 繁體中文, English
Tsara vakiana. Afaka manaraka ihany koa an'i Suranand ao amin'ny Twitter ianao.
Nanadihady fohifohy an’ i Gen. Sonthi Boonyaratglin, mpitarika ny miaramila tamin'ny 2006 i NaDao, mpanao gazetim-bahoaka eo an-toerana. Nilaza i Sonthi fa tamin'ny 2006, hanala olona iray ihany no heviny, i Thaksin, izay nahatonga ny korontana ary nino fa hitambatra ny firenena. Niaro ny nataony izy tamin'ny fanakianany ny firefarefan'ny zavabita sy ny fanapahan-kevitra tsy mety nataon'ireo mpiasa biraon'ny governemanta (notendreny) ho isan'ny antony nahatonga ny olan'ny firenena taorian'ny fanonganana.
Lahatsoratra iray hafa avy amin'ny ankolafy manohitra an'i Thaksin. Newgeneration mitanisa ireo tsinin'i Thaksin nandritry ny fanjakany.